အမေရိကန်နဲ့ ပြင်သစ်ထက် ဗမာတွေက ပိုပြီးတော့ သတ္တိရှိတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အမေရိကန်နဲ့ ပြင်သစ်ထက် ဗမာတွေက ပိုပြီးတော့ သတ္တိရှိတယ်။	22
အမေရိကန်နဲ့ ပြင်သစ်ထက် ဗမာတွေက ပိုပြီးတော့ သတ္တိရှိတယ်။
Posted by Thint Aye Yeik on Dec 28, 2014 in Creative Writing, Critic, Cultures, History, My Dear Diary | 22 comments
အမေရိကန်နဲ့ ပြင်သစ်ထက် ဗမာတွေက ပိုပြီးတော့ သတ္တိ ရှိတယ်။
ဗမာတွေရယ်… စုဝေးပြီး ထိုင်နေကြတယ်။
သူတို့ဟာ… ဘယ်လူမျိုးက သတ္တိအရှိဆုံးဆိုတာကို ထိုင်ငြင်းနေကြတာဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်တိုင်းပြည်သာလျှင် သတ္တိရှိကြောင်းကို သက်သေတွေ သာဓကတွေ ထုတ်ပြကြတယ်။
အမေရိကန်တွေက သူတို့ ဘယ်လောက် သတ္တိ ရှိကြောင်းကို သက်သေနဲ့တကွ ပြောတယ်..
”ငါတို့ဟာ ဘယ်လောက် သတ္တိ ရှိပြီး.. ဘယ်လောက် တာဝန်ယူစိတ် ရှိကြသလဲ..ဆိုရင်…
ကား ဆယ်စီး တန်းစီထားတယ်… ။
အဲဒီ ဆယ်စီးထဲမှာ တစ်စီးက…ဘရိတ်မပါဘူး ။
မောင်းထွက်လိုက်ရင် ရပ်လို့မရဘူး ။
ဒါပေမယ့်… အမေရိကန်ဆယ်ယောက်ဟာ… အဲဒီကားတွေပေါ်ကို တက်လိုက်ကြတယ် ။
ဘယ်သူဟာ…ဘရိတ်မမိတဲ့ကားကို မောင်းမိမလဲ…မသိကြဘူး ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြဟ် အဲဒီ အမေရိကန် ဆယ်ယောက်ဟာ.. သတ္တိရှိစွာနဲ့…
ကားဆယ်စီးလုံးကို ကိုယ်စီမောင်းထွက်လိုက်ကြတယ်… ။
ကုန်းဆင်းကြီးကို မောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ… ဘရိတ်မမိတဲ့ ကားကိုမောင်းမိတဲ့
ဒါပေမယ့်… ကျန်တဲ့ အမေရိကန် ကိုးယောက်က…အဲဒီ ဆေးကုသနေရတဲ့
အမေရိကန်ကို…လူနာသတင်းမေးဖို့ မပျက်မကွက် လာကြတယ်… ။ ”
အမေရိကန်တွေက.. သူတို့ရဲ့ သတ္တိ ရှိမှုနဲ့… တာဝန်ယူစိတ်ကို သက်သေပြ ပြောအပြီးမှာ…
ပြင်သစ်တွေကလည်း အားကျမခံ ထပြောတယ်… ။
”ငါတို့ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေက ပိုပြီး သတ္တိ ရှိပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက …ငါတို့ ပြင်သစ်လူမျိုး ဆယ်ယောက်ကို
.ပြင်သစ်အမျိုးသမီး ဆယ်ယောက် လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်တယ်။
အဲဒီ အမျိုးသမီး ဆယ်ယောက်ထဲမှာ… တစ်ယောက်က HIV ရောဂါ ရှိနေတယ်။
.ရောဂါသည်အမျိုးသမီးဟာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ မသိရဘူး ။
.ယောကျာ်းဆယ်ယောက်ဟာ..မိန်းမဆယ်ယောက်ကို တစ်ယောက်စီ ရွေးယူပြီး အိပ်လိုက်ကြတယ်။
.နောက်ဆုံးတော့… ပြင်သစ်ယောကျာ်း ဆယ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဟာ
HIV ရောဂါ ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီး…. ဆေးရုံပေါ် ရောက်သွားတယ် ။
ပန်းစည်းတွေ မပျက်မကွက် လာပို့ကြတယ်လေ။ ”
အမေရိကန်တွေနဲ့ ပြင်သစ်တွေရဲ့ ကြွားလုံးသက်သေ အပြီးမှာ…
ဗမာတွေကလည်း. .. သေးသေးတင် မခံပါဘူး ။
နိုင်မယ်ထင်ရာ သက်သေနဲ့ ပြန် ခွန်းတုံ့ပြန်တယ်… ။
” ငါတို့ ဗမာတွေကသာ သတ္တိအရှိဆုံး တာဝန်ယူမှု အရှိဆုံးဖြစ်တယ်… ။
တစ်ခါတုန်းက ငါတို့တိုင်းပြည်ဟာ…နိုင်ငံရေး ပြောရင်…အဖမ်းခံရတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက… ဗမာဆယ်ယောက်ဟာ…နိုင်ငံရေးတွေ ထိုင်ပြောကြတယ်။
လက်ရှိအစိုးရရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေကို ဝေဖန်ပြောဆိုကြတယ်။
အဲဒီ ဗမာ ဆယ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဟာ အစိုးရကို သတင်းပြန်ပေးတဲ့ သူလျှိုဖြစ်တယ်။
အဲဒီ ဗမာဆယ်ယောက်ဟာ.. အစိုးရ မကောင်းတဲ့အချက်တွေကို အားရပါးရ ထိုင်ပြောလိုက်ကြတယ်။
.နောက်ဆုံးတော့… ကိုးယောက် ထောင်ကျသွားတယ် ။
အစိုးရ သတင်းပေးဖြစ်တဲ့ တစ်ယောက်က…ထောင်ကျသွားတဲ့ ကိုးယောက်ကို
ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့တယ် ။ ”
( ဇာဂနာ ပြောတဲ့ စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှ ဟာသပုံဝတ္ထုတစ်ခုကို နားထောင်ပြီး ပြန်ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ )
၂၀၁၄ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ၊
မြစပဲရိုး says: ရိုးရိုး လာတွေ့တာလား။
waterboarding (နှစ်ခြင်း လုပ်ပြီး သတင်းနှိုက်ယူ ခြင်း) လုပ်ဖို့ လား။ ပြောရရင် ပုံပြင်ထဲ
(၁) အမေရိကန် တွေ သတ္တိကောင်းတယ် မခေါ်။ မိုက်ရူးရဲတာ။ (ဒါမှမဟုတ်) ကံစမ်းပွဲ လုပ်တာ။
(၂) ပြင်သစ် တွေ ကတော့ နှာထ တာ။ ဆယ်ရေး တစ်ရေး ရောဂါ ရမယ်မှန်းသိသိ နဲ့။
(၃) မြန်မာ တွေ ကမှ သတ္တိကောင်းတာ လေ။
အခု ကြည့်ပါလား။ ရွာ ထဲတောင် ရှိနေရင် ရှိနေမှာကို သိသိ နဲ့။ lol:-))))))))))
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: မြန်မာတွေ သတ္တိအကောင်းဆုံး….
အကောင်းတွေ ဆုံးမသွားဖို့သာ လိုတယ်…
ခင်ဇော် says: ဗမာ တွေ သတ္တိကောင်းတာတော့ပြောမနေနဲ့တော့။
ဘာလို့တုန်း ဆို မွေးကတည်းက ရွေးချယ်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ ဘဝမျိုးတွေ ရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ လူဖြစ်နေလို့။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: သတ္တိရော..
ခံရပါများလို့..ထုံတောင်နေပြီဆိုပါတော့… တာဝန်ယူမှု တာဝန်သိမှုကတော့… အင်းးးးးး
ဦးဦးပါလေရာ says: .အပေါ်က အရီးလတ်ရဲ့ကွန်မင့်လေးကို နဲနဲပြင်ပြီး သံယောင်လိုက်ချင်တယ်
ရွာ ထဲတောင် သေချာပေါက် ရှိနေမှာကို သိသိ နဲ့။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: သေချာပေါက်တော့ ရှိလိမ့်မယ်..
ဒါမယ့် ..ရွာသူားချင်းချင်း.. ရိုင်းပင်းပါလိမ့်မယ်… (ထောင်ထဲတော့ ပို့လိမ့်မယ်မထင်)
မျှော်လင့်ထားတာပြောပါတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဒါလေးမြင်တော့ … ကြားဖူးတာလေး သတိရတယ်…..
ဆဒမ်ဟူစိန်ကို အလ္လာအရှင်မြတ်က ကောင်းကင်ဘုံမှာ ခေါ်ဆူတယ်…
မင်းကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေ သေရတယ်..၊ မင်းကြောင့် စစ်ပွဲတွေဖြစ်ရတယ်…မင်းကြောင့်..
၂၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ ဆဒမ်ဟူစိန် ငိုပြီး ပြန်သွားတယ်….
ဂျော့ဘုဂ်ျကို ဘုရားသခင်က ကောင်းကင်ဘုံမှာ ခေါ်ဆူတယ်…
မင်းတီထွင်လိုက်တဲ့အရာတွေကြောင့် လူတွေ ပိုသေရတယ်…၊ အပြစ်မဲ့သူတွေ သေကုန်တယ်….မင်းကြောင့်…
နာရီဝက်လောက်ဆူပြီးတော့ ဂျော့ဘုဂ်ျငိုပြီး ပြန်သွားတယ်…..။
ဦးသန်းရွှေကို ဗုဒ္ဓက ခေါ်ဆူတယ်….
မင်းနဲ့ မင်းမိသားစုကောင်းစားဖို့ မြန်မာပြည်ကြီးကို ရောင်းစားတယ်၊ မင်းကြောင့် လူတွေ လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးကုန်တယ်၊ မင်းကြောင့် မြန်မာပြည်ဟာ သယံဇာတပေါရဲ့သားနဲ့ ဆင်းရဲနေရတယ်….
ဒေါ်မြလေးပြောသလို ပြောရရင်…ပြောကို မပြောချင်ဘူး…
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: လက်လန်တယ်..
La Yeik says: အခုလည်း ပြောချင်တယ်…ဒီအစိုးရကို လုံးဝမကြိုက်ဘူး….သတ္တိရှိတယ်ကွ..အာဟိ
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အယ်….
မောင်ဘလိူင် says: ဆရာ သော်တာဆွေ ရေးသလို တို့ပေါင်းတည်သား ဆိုတာ ပြင်သစ်ပြည် ဂါစကွန်နယ်သားတွေလို
အင်မတန် သတ္တိကောင်းတာကလား တဲ့။ ဘယ်လို သတ္တိလည်းတော့ မသိဘူး။ တို့ အဘေးကြီး
ဆိုလည်း ပေါင်းတည်သားကွဆိုပြီး ဆော်လိုက်နှက်လိုက်နဲ့။ အမယ်..သူက လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်
တောင် ခွေးခြေနဲ့ကောက်ရိုက်ခဲ့တာ ဆိုပဲ။ ဒါတော့ မယုံဘူး။ (ဖိုးတုတ်လို ကတုံးဆံတောက်နဲ့လူ
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ကျနော်လည်း သတ္တိရှိပါတယ်။
အဲ့ဒါကို ထုတ် မသုံးရဲဘူး
Shwe Ei says: -အခုကျတော့ ကြိုက်သလောက်ပြောလို့ရဘီ…မဖမ်းတော့ဝူး
-တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများက နားထဲဂွမ်းဆို့ထားလိုက်ဘီဆိုတော့လေ :P
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: နေ့ဘက်မှာ မဖမ်းတော့ဘူးးးး အဲ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1982
CharTooLan says: နီ…. တိတ်တက်ဒိချိနေဒယ်ဘော့လေ ဟတ်လား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: သတ္တိလား..
Paing Lay says: ထောက်လှမ်းရေးက ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့တာထက် နိုင်ငံရေးပြောတဲ့သူတွေကို သတင်းလာလာနှိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ် နှိပ်စက်မှုပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ပေါ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ထောင်ထဲလည်း ကောင်းကောင်းနေရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သတ္တိတော့ လာမစမ်းနဲ့……………
ရှိမှမရှိတာ ဘယ်မှာစမ်းလို့ ရမှာတုန်းးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: သတ္တိ ဗလာပေါ့လေ…
ဗလာရဲ့ စွမ်းအားက အတော်ကြီးသကိုးးးးးဆိုပြီး.. ဂုဏ်ယူနေရမှာပေါ့နော်..
ဗလာကျင်းနေတဲ့ခွက်က..ပိုအသုံးဝင်တယ်တို့…ဘာတို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: တကယ်တော့ ဒါဟာ ကိုယ်ကျိုးရှာသွားတာပါ…
အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းဖြစ်ပေမယ့် – – – ကောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ ဟာသလေး အမှတ်ရမိတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 53
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ထောင်ဝင်စာ စားရဲကြပါကြောင်းသိရပါသည်